Kismaayo News » Axmed Madoobe oo dhiiri galiyay ciyaartoyda Jubbaland
Axmed Madoobe oo dhiiri galiyay ciyaartoyda Jubbaland
Kn: Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa martiqaad u sameeyay ciyaartoyda ka socotay maamul gobolleedka Jubbaland, kuwaasi oo caasimadda Qaranka u jooga inay ka qayb galaan tartanka ciyaaraha maamul gobolleedyada iyo gobolka Banaadir.
Munaasabadan oo sidoo kale ay goobjoog ahaayeen xildhibaano labada aqal iyo marti sharaf kale, ayuu Axmed ku booriyay dhalinyarada inay sanadkan koobka ku soo dheelmaan Kismaayo. Madaxweyne Axmed ayaa sheegay inay lama huraan tahay in la soo celiyo meeqaamkii uu gobolku ku lahaanjiray tartan ciyaaraha gobollada. Wuxuu u sheegay dhalinyarada in ciyaartu ay tahay wada ciyaar iyo isla dheelis ku sargo’an wadashaqayn ee in qof kaliya is yiraahdo goolka uun dhali waxay idin dhaxalsiinaysaa guuldarro.
Dhalinyarada iyo macalimiintooda ayaa madaxweynaha Jubbaland uga mahadceliyay dhiirigalinta iyo dardaaranka wanaagsan, waxayna balanqaadeen in dhanka Rabi mooyee ayna dhankooda dadaal isula hari doonin.
Maalinta Jimcaha ah ayaa la filayaa in Jubbaland iyo Banaadir ay wada dheelaan ciyaarta ugu horeysa ee tartanka maamul gobolleedyada iyo Banaadir.